Ukuzinza okusha nokuthuthukisiwe kwamakhamera we-iPhone 13 | Izindaba ze-IPhone
Ukuzinza okusha nokwenziwe ngcono kwamakhamera we-iPhone 13
Ukuzinza kwekhamera ye-iPhone kungenye yamandla ayo amakhulu, yingakho yize sebethule umncintiswano ngamadivayisi anamakhamera angcono ephepheni, iqiniso ukuthi basekude kakhulu nokuqoshwa kwevidiyo kwe-iPhone kuzo zonke izici.
Ngokusho kwabahlaziyi, Ibanga elisha le-iPhone 13 lizofaka ukusimama kokufuduka okubonakalayo kuwo wonke amadivayisi alo. Akungabazeki ukuthi i-Apple izoqhubeka nokusebenza kukhamera futhi ibhejele ekurekhodweni kwevidiyo ukuze yehlukanise nomncintiswano oqondile, ngabe lokhu kusengaphambili ekuqiniseni kusho ukweqa kwekhwalithi yangempela? Sizobona.
Ngokuya nge-DigiTimes, njengoba babelane ngayo Ama-MacRumors, ukuzinza ngokusebenzisa ukufuduka kwenzwa kuzobakhona kuwo wonke amadivayisi azokwethulwa ekupheleni kuka-2021. Lesi sici asizukuvumela ukuqoshwa kuphela ngokuzinza okufana kakhulu nekhamera yefilimu, kodwa futhi singathuthukisa ikhwalithi yezithombe ezimeni zokukhanyisa ezimbi kakhulu.
Abakhiqizi be-VCM (Voce Coil Motor) bacelwe ukuthi bandise umthamo wokukhiqiza ngo-30-40% ukubhekana nesidingo esinamandla kulandela ukufakwa kuhlu olusha lwe-iPhone.
Lolu hlobo lwenzwa seluvele lukhona kwi-Wide Angle sensor ye-iPhone 12 Pro Max, enemiphumela esobala, ethola ukuthuthuka okuphawulekayo ezithombeni nakwezinye izimo zokukhanya okuphansi. Nge-iPhone 13 lolu hlobo lokuzinza ngeke lufinyelele kuphela "endodeni enkulu" yomndeni, kepha luzoba khona ngisho nasemabangeni aphansi, njenge-iPhone 13 ne-iPhone 13 Mini. Ingxenye yezithombe ye-iPhone 13 izoba yinto eheha kakhulu abasebenzisi nokuthi i-Apple izogxila kuphi emizamweni yayo, ngakho-ke kubonakala sengathi sizobhekana ne-iPhone 12 "S", ngabe unentshisekelo kulezi zindaba ezintsha ze-Apple?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » Ukuzinza okusha nokwenziwe ngcono kwamakhamera we-iPhone 13
IMagic Magic oyiphuphayo nalokho ayisoze yafika
Le yindlela u-Apple azithuthukise ngayo izinkundla zezingxoxo zeWWDC 2021